Ngaphambi kokuthi uthumele - i-AfricArXiv
Imininingwane ejwayelekile ngaphambi kokuthumela
Kungani kufanele wabelane ngemiphumela yakho yocwaningo ekhasini lokugcina?
Imibhalo yesandla yangaphambi kokubanjelwa kuvunyelwe yokugcinwa ye-AfricArxiv Ukusakazwa kwamahhala nokusheshayo futhi izingxoxo zomhlaba womphumela wokucwaninga ngaphambi kokushicilelwa kwiphephabhuku elibukezwe ontanga.
Zonke izindatshana ezishicilelwe zizonikezwa a CC BY Ilayisense ye-4.0 futhi DOI (okokuhlonza into yedijithali) futhi kukhonjiswe kuGoogle Scholar. Uma uzisebenzisa futhi, futhi ikakhulukazi lapho usho, isimo se-prerint kufanele simakwe ngokucacile.
Ngicela uqaphele: I-AfricArXiv akuyona incwadi yezindaba futhi ayihlaziyi ikhwalithi yesayensi yombhalo wesandla kuyo yonke imininingwane. Uma umbhalo wesandla udlulile ngokulinganisa futhi ushicilelwa, uphikelela ohlelweni unomphela. Sigodla ilungelo lokuhoxisa imibhalo yesandla ngemuva kokushicilelwa uma kukhonjwa inkohliso noma ubuqili.
Sikhuthaza ukusebenzisana komphakathi ngokubeka amazwana kanye nokwabelana ngezimpawu. Funda kabanzi ku- info.africarxiv.org/peer-review.
Bheka ukuhambisana kokulandela kwamaphephabhuku nezikhathi zokuvimbela: Sebenzisa le SHERPA / RoMEO insizakalo yokubheka izinqubomgomo zokushicilela zamaphephabhuku ukuthola eminye imininingwane ngezinketho zokuzigcina zekhompyutha lapho uhlela ukushicilela i-athikili yakho.
Sikhuthaza ukuthunyelwa okuvela ku
Ososayensi base-Afrika abasuselwa ezwenikazi lase-Afrika
Ososayensi base-Afrika njengamanje abasebenza esikhungweni sokubamba ngaphandle kwe-Afrika
ososayensi abangewona ama-Afrika ababika ngocwaningo olwenziwe endaweni yase-Afrika; okungcono nababhali ababambisene nabo e-Afrika
ososayensi abengewona ama-Afrika abika ocwaningweni oluphathelene nezindaba zase-Afrika
Samukela izinhlobo ezilandelayo zemibhalo yesandla - Ilungelo lokushicilela noma lokuposa:
imiphumela 'engemihle' nemiphumela ye-'-null' (ie imiphumela engaxhasi i-hypothesis)
Amaphepha wedatha nezindlela
Amaphepha encazelo ye-Dataset
Ezinye izinhlobo zefomethi zizocatshangelwa lapho kufakwa.
Faka amafayela ongezekayo nedatha
Ungangeza futhi uxhumanise kumafayili ongezekayo kunoma iyiphi ifomethi ngesitoreji esingenamkhawulo.
Izindatshana zocwaningo ezishicilelwe
Uma ufuna ukwabelana ngesandla esivele sishicilelwe njenge-athikili yendatshana, iya ku kanjanicanishareit.com futhi unamathisele i-athikili ye-DOI kumaskhi wokusesha; hlola ukuthi ngabe 'njengokwengeza' kuza phakathi kwamafomethi wokushicilela owamukelekile.
Iningi lamaphephabhuku ezemfundo ayakwamukela ukulondolozwa kokugcina, abanye abakwamukeli. Ukuthola okuningi hlola ISherpa / i-RoMEO database.
Lungiselela umbhalo wakho wesandla
Faka umbhalo wakho wesandla njengefayela le-PDF.
Uma udinga usizo ngokufomatha, ungasebenzisa ithempulethi yesandla elandelayo ehlanganiswe yithimba lokulinganisela lokuhambisa le-AfricArXiv.
Faka inothi ekhasini lokuqala lisho "Lokhu kungumbhalo othunyelwe kwijenali le-XXX" lapho kusebenza khona. Lapho lo mbhalo wesandla wamukelwa yiphephabhuku elibukezwe ontanga ungabuyekeza umbhalo wokuqala kusiqalo noma uthumele imibhalo yombhali bese ushintsha lo mbhalo ube "Lesi isithonjana sokuphawulelwa ukuthi sibuyekezwe futhi sabuye samukelwa ngephephabhuku i-XXX."
Uyacelwa ukuthi uqinisekise ukuhlonipha imibandela efanele ye-copyright kanye nelayisense yamafayela owalayishile. Emibhalweni yesandla yezazi, ilayisense elisetshenziswa kakhulu I-CC-BY-SA 4.0.
Qhubeka nokuthumela umbhalo wakho wokuqala
Manje njengoba usufunde yonke imininingwane edingekayo ongayiqhathanisa futhi ukhethe phakathi kwezingxenyekazi zethu zozakwethu ukuhambisa umbhalo wesandla sakho wokuqala:
Sisebenzela ekwakheni indawo yokugcina ephethwe yi-Afrika ngakho-ke sifinyelela futhi sixoxa nezinye izinhlangano nabalingani bethu abahlukahlukene. Okwamanje, sisebenzisana nabanye abahlinzeki bezinsizakusebenza abasunguliwe njengoba kubhalwe ngezansi.